ကာဗာနီပေးသည့်ကစားကွက်အပြောင်းလဲကိုဒါဘီပွဲမှာအသုံးချဖို့ဂုရုကြီးဖာဂူဆန်ပြောပြီ – FBV SPORT NEWS
ကာဗာနီပေးသည့်ကစားကွက်အပြောင်းလဲကို ဒါဘီပွဲမှာ အသုံးချဖို့ ဂုရုကြီးဖာဂူဆန် ပြောပြီ
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ EFL Cup ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ် ဇန်နဝါရီ (၇) ရက်မှာ အိုးထရက်ဖို့စ်မှာ လက်ခံကစားဖို့ရှိပါတယ်..
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပြီးခဲ့သည် လက်စတာနဲ့ ပွဲမှာ ကာဗာနီ နဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက် ဂိုးရပြီး ကောင်တာတွဲလုံးတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်…ယင်းပွဲမှာ ကာဗာနီဟာ ယူနိက်တက်ကစားကွက်အပြောင်းအလဲ အတွက် အမြင်သစ်တခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်..
မန်ချက်စတာယူနိက်တက် ကို သံယောစဉ်ကြီးရှာသော နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ကတော့ ယင်းပွဲမှာ ကာဗာနီနဲ့တူ ပြောင်းလဲသုံးသင့်သော ကစားကွက်အလှည့်အပြောင်းအကြောင်းကို MUTV မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်….
ဖာဂူဆန်က ” ကျနော်တို့ ယူနိက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဝိန်းလို နေရာမရွေးဆော့နိုင်တဲ့ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးနောက်တယောက်ကို မကြာခင်မှာ မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိပါတယ်..အဲ့ဒီကစားကစားသမားကတော့ ကာဗာနီပါဘဲ
သူရဲ့ နေရာစုံ မှာ ပြောင်းလဲကစားနိုင်တဲ့အရည်အချင်းကို သူဟာ လက်စတာ စတီးရဲ့ King Power ကွင်းထဲမှာ ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်…အိုလေ အနေနဲ့ 4-2-3-1 ကို အသုံးပြုတာကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်….
ဒါပေမဲ့ ကစားသမားတွေဟာ Boxing-Day ထဲမှာ ပွဲပန်းလာနိုင်ပါတယ်…အဲ့ဒီတော့ 4-4-2 ကို မဖြစ်နေသုံးသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်…..အကြံပေးရုံသာပါဘဲ…..ကစားသမားတွေကို အပြောင်းအလဲအသုံးပြုရာမှာ တိုက်စစ်မှာ မာရှယ်နဲ့ ကာဗာနီကို တွဲသုံးပြီး ဘရူနိုနဲ့ ပေါ့ဘကို ကွင်းလယ်မှာထားကစားနိုင်သလို…..
ကာဗာနီကို အထောင်ထားပြီး ဘရူနိုကို နောက်ချန်တီုက်စစ်မှူးထားကာ မာရှယ်နဲ့ ရတ်ဖို့စ်တို့က တောင်ပံတွေကနေ တဖက်အသင်းရဲ့ နောက်တန်းဖိအားပေးတာမျိုးတွေလုပ်သင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်….ယူနိက်တက်မှာ ကစားသမားကောင်းတွေရှိနေပါပြီ……
ဒီလိုအခြေနေတွေကို အိုလေ ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ပါတယ်..သူအသုံးချတတ်မှာပါ…မန်ချက်စတာယူနိက်တက်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာကို အိုလေ ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ် ” ဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်….
နွေရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း သေချာသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကစားသမား